Fanohanana ho an'ny olon-dehibe ny ankizy: ny toe-piainana - Ny mpahay lalàna ao Frantsa online!
Fanohanana ho an'ny olon-dehibe ny ankizy: ny toe-piainana
Tsara ny fandoavana ny fikojakojana dia tsy hitsahatra ny ho maro an'isa ny zaza
Ny olon-dehibe ny ankizy tsy afaka manome noho ny zavatra ilain'ny tena manokana mba mbola handray ny fikojakojana. Ny fikojakojana ny andraikitra dia adidy izay mamatotra ny mpikambana ao amin 'ny fianakaviana iray ary izay manome fa ny mpikambana ao amin' ny fianakaviana iray dia tsy maintsy manavotra ny tsirairay rehefa iray amin'izy ireo no sahirana.
Lehibe ny ankizy mila noho izany dia afaka mahazo ny fikojakojana, toy ny ankizy tsy ampy taona.
Ny ankamaroan ny fotoana, izy ireo no handray izany avy amin'ny ray aman-dreniny.
Fa raha ny ray aman-dreny no tsy manana ny fitaovana mba hamonjy ny zanany, ny fisotroan-dronono mba ho aloa amin'ny raibe sy renibe na ny hafa ao amin'ny fianakaviana izay manana ny fahafahana handoa alimony.
Ny zavatra ilain'ny ankizy dia tokony ho nikarakara ny ray aman-dreny mandra ny ankizy mahazo ny fahaleovan-tena ara-bola. Tsy ity no taona izay zava-dehibe, na ny toerana misy ny zaza (mpianatra ohatra) fa ny toe-draharaha ara-bola ny ankizy. Ny olon-dehibe ny ankizy, na izy mivantana na tsia na dia ao amin'ny iray amin'ireo ray aman-dreny, dia afaka mangataka alimony ny ray aman-dreniny. Izany fangatahana izany, miantefa amin'ny ankizy ny tenany na ny ray aman-dreny izay mampiantrano izany, dia tokony ho nanao ny mpitsara nandritra ny raharaham-pianakaviana.
Ny zaza dia tsy maintsy manazava ny mpitsara izay izy no tsy afaka hihaona ny filàna fototra, ary izany dia noho izany mila fikojakojana.
Ny zaza (na ny na ny ray aman-dreny dia mba hanaporofoana fa izy no mila. Ny mpitsara dia mamaritra ny habetsahan'ny alimony, ny soso-kevitr'izy na ny mila zaza sy ny ray aman-dreny. Zava-dehibe ny mahafantatra fa amin'ny toe-javatra sasany, ny fitsarana ny fisaraham-panambadiana na ny fisarahana araka ny lalàna mamaritra mandra rehefa ny ankizy fanohanana tokony aloa. Ohatra: mandra-ny ankizy mahazo ny karama farany AMBANY indrindra, na ny antsasaky ny lalàna ny karama farany AMBANY indrindra. Raha toa ny iray amin'ireo ray aman-dreny tsy te-handoa fanohanana ny ankizy mba ny olon-dehibe ny ankizy, dia tsy maintsy manaporofo fa ny ankizy dia afaka mikarakara ny tenany ny filàna fototra. Raha ny olon-dehibe ny ankizy manomboka ny asa ary amin izany dia mahazo ny fahaleovan-tena ara-bola, dia tsy azo atao ny mijanona tampoka ny fandoavam-bola fanohanana ny ankizy. Izany no ilaina ny manao ny fanendrena mialoha ny fianakaviana fitsarana ny mpitsara, raha toa ny toe-javatra no nihaona, mety hamarana ny fandoavam-bola ny fisotroan-dronono. Ny olon-dehibe ny ankizy dia afaka mangataka fa ny ankizy fanohanana ho mivantana karama, ohatra, rehefa velona izy tsy miankina any an-trano ny fianakaviana."Ny ray aman-dreny izay mihevitra ny tena andraikitry ny olon-dehibe ny ankizy izay tsy afaka ny tenany hitsena ny zavatra ilain'ny tena manokana mba hangataka ny ray aman-dreny hafa mba handoavana ny fandraisana anjara ny fikojakojana ary ny fanabeazana. Ny mpitsara dia afaka manapa-kevitra na ny ray aman-dreny dia afaka manaiky fa izany fandraisana anjara tokony haloa amin'ny manontolo na amin'ny ampahany ao an-tanana ny ankizy."Ka ny ankizy iray dia afaka mangataka fa ny fisotroan-dronono aloa mivantana ("tanany"), ny ray aman-dreny izay hatramin'izao nahazo ny fanohanana eo amin'ny toerany dia tokony ho nanaiky. Ao ny zava-nitranga ny ady eo amin'ny zaza sy ny ray aman-dreny mpandray ny fisotroan-dronono, izany no niakatra ho any amin'ny mpitsara ho an'ny raharaham-pianakaviana mba hanorim-ponenana. Raha ny mpitsara dia mahita fa ny ray aman-dreny tsy manana am-ponja ny zaza, dia mba alimony aloa mivantana amin'ny ankizy. Afa-tsy raha toa ny iray amin'ireo ray aman-dreny dia mampiseho ny mpitsara fa ny zaza dia tsy afaka ny fitantanana ny teti-bola. Ny fampiharana ny fandoavam-bola mivantana ny ankizy fanohanana ny olon-dehibe ny ankizy koa dia mety ho nangataka ny ray aman-dreny, raha toa ny olon-dehibe ny ankizy, na manaiky ny fitsipika. Ny olon-dehibe ny ankizy izay ara-bola tena manohana tsy misy antony tokony handray ny fikojakojana. Ny ray aman-dreny izay mandoa fanohanana ny ankizy mba hampihatra ny mpitsara nandritra ny raharaham-pianakaviana ny fangatahana ny ankizy fanohanana intsony ny vola aloa, ny fifanarahana na tsia ny zaza. Ny olon-dehibe ny ankizy, dia te-manohy mandray ny fisotroan-dronono, dia tsy maintsy manaporofo hiatrika ny mpitsara izay ny loharanon-karena tsy mamela azy ny hihaona amin'ny filàna fototra (satria tsy ampy ny karama na ny fanohizana ny fianarana, ohatra). Izany dia ny mpitsara fa dia tsy maintsy manapa-kevitra na tsia mba hanala ny fanohanana. Amin'ny ankapobeny, ny fitsarana dia mino fa ny zaza lehibe ny fianarana fifanarahana karama na mandray karama ao amin'ny karama farany AMBANY indrindra tsy manana antony tokony handray soa avy amin'ny fanohanana. Jurifiable ny ary azo itokisana ny torohevitra araka ny lalàna, ary avy hatrany. Mahita ny mpisolovava amin'ny fandrefesana, mampitaha ny fakan-teny.
Ny latabatry ny jeografia ao amin'ny tontolo maoderina-Boky nomerika
Asistență cu executorii judecătorești